Avidemux maka Mac Alternative (Mountain odum gụnyere)
> Resource> Mac> Avidemux maka Mac Alternative (Mountain odum gụnyere)
Avidemux maka Mac bụ ihe dị mfe na free video edezi ngwá ọrụ e site SourceForge. Ọ na-eme oké ọrụ na-emecha dị mfe ọnwụ, nzacha na ngbanwe aga-eme na Mac. Ebe ọ bụ na-emekọ a dịgasị iche iche nke video formats dị ka AVI, MPEG, MOV, MP4, MKV, wdg, otú ị ga-ịdị na-ezute faịlụ agụ njehie nsogbu ndị dị ka iMovie. Lelee video nkuzi banyere otú dezie vidiyo na Mac mbụ.
Otú ọ dị, dị ka ihe edezi ngwá ọrụ maka Mac, i nwere ike na-eche ụfọdụ nke ya ọrụ kwa isi, apụghị afọ ju gị mkpa. Na-aga n'ihu mkpọka (Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ OS X 10.7, 10,8, 10,9, 10.10, 10.11) nwere ike ụgbọala ị na ewere bụrụ na ị bụghị otu ọkachamara na ya.
Ya mere, ebe ị ga-esi a ọzọ dị ike na a pụrụ ịdabere Avidemux ọzọ maka gị Mac: Wondershare Video Editor maka Mac. Gbalịa ya maka free ugbu a.
1 Unlimited format nkwado
Dị nnọọ ka Avidemux, nke a Mac ọzọ omume nwere widest nkwado maka formats. Ọ bụrụ na ị mgbe nchegbu banyere complexity nke formats, codecs, ụkpụrụ, na mkpa a eluigwe na ala edezi omume na-emeso ha. Mgbe ahụ, a usoro ihe omume ga-gị isi ọwụwa pụọ. Ọ na-akwado niile nkịtị video formats ị ga-, dị ka AVI, WMV, MOV, MP4, MTS, DV, M4V, ASF, Flv, 3GP, na kwa a ọnụ ọgụgụ nke adịkarịghị hụrụ faịlụ: Tod, EVO, TP, DAT, ka aha dị nnọọ ole na ole. All mgbe ọdịyo na photos na-akwado. Ya mere, ị dị nnọọ ịdọrọ na dobe faịlụ ị ga-esi, ọ dịghị mkpa iji tọghata ya maka ndakọrịta n'ọdịnihu, na ọ dịghị mma ọnwụ.
2 Mfe ma kpọmkwem video edezi
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) maka Mac bụ ahụkebe n'ihi na nke keukwu edezi ngwaọrụ. E wezụga ihe niile isi edit ngwá ọrụ dị ka trimming, cropping, adiana, kewara, flipping, ọ na-enyere gị iji wepu audio si video, tinye n'okirikiri ka video, mmekọrịta voiceover, na ndị ọzọ.
Ọ bụ ọnụ ahịa banyere na Avidemux maka Mac ọzọ nwekwara ụkpụrụ a Ike ngwá ọrụ, nke bụ adịghị na ọbụna ndị kasị ọkachamara-ọkwa video edezi ngwa. Set Powerl Ngwaọrụ agụnye Tilt-Mgbanwe (ịgbanwe a idaha n'ime a miniature ụwa), Mozis (enyere zoo onwe onye ma ọ na-ekwesịghị ekwesị na mpaghara), Kweta Off (ịgbanwe ihu gị na ihe ndị kasị akpa ọchị masks).
3 Ọgaranya mmetụta nzacha na-emetụ gị videos
Avidemux maka Mac ọzọ na-onwem na otu n'usoro nke kpochapụwo na ọmarịcha visual mmetụta itinye gị video clip. Ọzọkwa, ị nwere ike họrọ mmetụta nyo itinye niile ma ọ bụ a otu faịlụ dị ka kwa gị mkpa. Ụfọdụ nzacha ọbụna ekwe ka gị kpatụ parameters iji nweta pụrụ iche pụta. The n'akụkụ Michael window ga-ekwe ka ị na-ahụ mmetụta na ozugbo.
4 Save na ịkọrọ gị ihe e kere eke ọ bụla
Ọ dịghị onye ga-ezere ịkọrọ ha kere ndị enyi na ezinụlọ na internet. Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) maka Mac na-elekọta gị mkpa, na-eme ka video nkekọrịta mgbe mfe. Mgbe ị na-rụchaa video edezi, i nwere ike ịkọrọ ịkparịta ụka n'Ịntanet weebụsaịtị kpọmkwem site a na ngwa: YouTube, Facebook, Twitter.
Ga-amasị nyefee dezie video ndị ọzọ dijitalụ ngwaọrụ dị ka iPad, iPhone, Android Smartphone maka playback? Họrọ gị kpọmkwem nlereanya n'okpuru "Ngwaọrụ" taabụ, na mgbe mmekọrịta gị ọkpụkpọ na dịghị ịgba.
Avidemux Ọ dịghị Sound Ngwọta
6 Ụzọ ka ihichapụ nchekwa Windows / Mac
Top Atụmatụ mkpa ka ị mara banyere-enye ume ọhụrụ webpages on Mac na Windows
Get TS Ntụgharị maka Mac iji tọghata TS na Mac OS X (El Capitan gụnyere)
Download Best Flip4Mac Alternative Mountain Odum